I-Psycho Hitchcock yaveza uchungechunge lwezingqamuli ezingapheli (kwezinye izinto uPerkins osekhulile wasuswa) futhi ibuyisela (kufaka phakathi iphrojekthi yefilimu yombala kaGus Van Sent cishe ngokuveza ngokuzwakalayo ekuqaleni). Ngo-1987, isiteshi sethelevishini se-NBC sisakaza isiqephu esithi "Motel Bates" (abalingisi: B. Inkantolo, uL. Petty, M. Gunn, uHenry Henry) - i-prequel yomdwebo odumile. Yanikezwa njengendlela yokukhishwa kwe-pilot yochungechunge lwethelevishini mayelana nezenzakalo ezizungeze i-motel eyingozi kanye nokuthi ungubani umphathi wayo. Kodwa ukulinganisa kwakuhle kakhulu, futhi akuhambanga phambili. Kodwa ngo-2013, isiteshi se-A & E samemezela ukukhululwa kweziqephu ezingu-10 zochungechunge elithi "Motel Bates" (abalingisi: V. Farmiga, F. Haimor, M. Tiriot, O. Cook, N. Carbonell) ngaphandle kwamaqembu okugxila, abagibeli bezindiza kanye nokunye ukulibala.
URichard Rothstein, osebenza ngesikhathi esifanayo kwi-hypostasis yomqondisi nomdwebi we-screenwriter, wenza i-movie yethelevishini "Motel Bates", eyayimiswe njengefilimu evuliwe "Psycho", engahlanganisi iziqu zayo ezintathu ezikhona. I-tape yadutshulwa endaweni yokuqala yesithombe sokuqala. Ifilimu ethi "Motel Bates" (abalingisi kanye nezindima ezikhethwe ngabakhiqizi uGeorge Linder noKen Tolopsky) ekuqaleni babekwe njengomshayeli ochungechungeni olude, okwakushiwo kakade, okwakungasuswanga njengomphumela. Umlingisi oyinhloko - uNorman Bates, uvele ekuqaleni kwefilimu isikhathi esithile. Indima yalowo mlingisi idlalwe nguKurt Paul, owaziwa ngokuthi ngu- Anthony Perkins emabhayisikobho "Psycho 2" no "Psycho 3". U-Perkins, ngaphandle kokuchaza izizathu, wenqaba ngokujulile ukuhlanganyela kule phrojekthi.
Isakhiwo sikaRichard Rotstein
Ngemuva kwezehlakalo ezivezwe yi-movie ethi "Psycho", umlingisi omkhulu uNorman Bates wathunyelwa esibhedlela sengqondo. Lapho uhlangana nesiguli somntwana, u-Alex West, owabulala uyise wakhe wesifazane odlwengula. UNorman ugcwele imizwa kayise ngo-Alex, eba nguyise wesibili womfana. Eminyakeni engamashumi amabili nesikhombisa kamuva, uNorman uyafa, eshiya eNtshonalanga ngekhaya lakhe kanye ne-motel engasebenzi kahle. Ezama ukuthola ithuba, u-Alex (Inkantolo Ebi), kanye nentombazane encane uWillie (Laurie Patty) enquma ukwenza ibhizinisi futhi avule i-motel. Kodwa esakhiweni esingenalutho, uqala ukubona umdwebo kaNorma Bates. Akucaci ukuthi ngabe ungowesifazane wangempela noma umoya wakhe, kodwa lokhu okuqhubekayo kuzama ukushayela iWest ngaphandle kwendlu kaBates futhi ungavumeli umfana aphinde avule i-motel. Abalingisi be-movie "Motel Bates", abajwayele iskripthi, baphefumulelwe futhi baprofetha iphrojekthi kaRichard Rotstein hhayi inkathi eyodwa kanye nokulinganisa okuphezulu. Kodwa ukusabela kombukeli kwakungeke kwenzeke futhi izibikezelo zabasebenzi azivunyelwe ukuba zigcwaliseke.
Indaba ephawulekayo mayelana nobuntwana nentsha kaNorman Bates
Ukuqala kabusha uchungechunge oluthi "Abakwa-Motel Bates" abathintekayo ekudutshulweni, okubizwa ngokuthi i-thriller ephawulekayo mayelana nobuntwana, ubusha kanye nentsha ye-protagonist Hitchcock Norman Bates nobuhlobo bakhe obuhlukumezekile nonina uNorma. Wonke umsebenzi odlule ngezinhloso ze "Psycho" uhlulekile ukufeza impumelelo ekuthuthukiseni umlingisi we-protagonist. Isizathu salokhu, mhlawumbe, sasiwukuthi uHitchcock wedwa uhlola umdwebo omuhle wokungcola nokwesaba. Bonke abanye abalobi bavele bazama ukuphinda baphumelele kwezohwebo kwe-blockbuster, kodwa bafeze lokho okuqhutshwa njengehhashi lika-Anthony Perkins. Ithenda lakhe elithembisayo nelithembisayo alizange lixazululwe, kanti uPerkins wahlala ebamba iqhaza elilodwa. Kamuva, umdlali we-actor wadlala phakathi kwezingqikithi zefilimu yokuqala, noma kumafilimu wesabelomali aphansi. Ifilimu ka-1987 isuswe ngokuphelele kwi-franchise, esikhundleni sikaBates, umlingiswa osemusha wenza. Kule phrojekthi ngemuva kwekota yekhulu leminyaka inqume ukubuya, ngakho ngo-2013 kwavela okokuqala kwezinkathi ezinhlanu ze-TV "I-Motel Bates". Abadlali abathintekayo emsebenzini base bevele benomlando wezwe kanye nefilimu emangalisayo.
U-Norman Bates osemusha kulolu chungechunge wadlala uFreddie Highmore, owaziwa yizilaleli njengomdlali wendima kaCharlie evela kuCharlie naseChocolate Factory nguTim Burton. Wakwazi ukukopisha ukukhanya okufana nesikhumba sika-Anthony Perkins, kodwa ngezikhathi ezithile wenza izinkomba kulo. Ngenxusa kanina, uHitchcock abonise ukuthi wayemise enzalweni yakhe, umlingisi uVera Farmiga wakhethwa ukuba abe i-Oscar. Wayekwazi ukujwayele ukujwayela indima yowesifazane ongathandeki, ngaleyo ndlela ebulala ubuthi bendodana yakhe esemusha. Umlingisi waziwa izilaleli kwifilimu yaseScorsese "The Departed". Indima kaDylan, umfowabo omdala nendodana endala uNorma, yadlala uMax Tiriot. Umgcini wemfihlo eyimfihlo, umsizi kumphathi wenkosi uZach Shelby, wavezwa esikrinini nguMichael Vogel, owaziwa ngezindima zakhe "ePan American" naseMiami Hospital. U-Nester Carbonell, ojwayele umbukeli ophethe indima kaRichard Alpert waseLost, kwakudingeka adlale isithandwa sikaRomero esolisayo futhi esilula. Abenza uchungechunge elithi "Motel Bates" bathola ukuhlolwa okuhle kwamakhono abo kokubili abahlaziyi befilimu nabantu abavamile.
Kungani isenzo sochungechunge sahlehliswa ezinsukwini zethu, akekho owaziyo ngaphandle kwabalobi. Lokhu kugxila kwe-cinematic ngesibindi futhi enhle, ukuguqulwa kubangele inani elikhulu kakhulu lezingxabano ezifuthekile nezibuyekezo eziphikisanayo. Embonini yefilimu isivele ihlangene nakho okufanayo, lo mkhuhlane waphonsa uRobert Altman ekuvumelaneni kwefilimu ye-"Long Farewell" ye-Chandler. Abadali bechungechunge lwe-TV "I-Motel Bates" baphinda le divayisi, bafaka umoya wokungapheli isikhathi, bephikisana ngokuthi ngisho noma izinsuku zekhalenda zishintshile, khona-ke i-motel nokuzungezile akukho lutho olushintshile.
Hmayak Hakobyan - umlingo, umlutha, umlingisi
Philosophy kanye nokuziphatha kuka-Aristotle
Ukwahlukanisa izindlela zokufundisa.